Kuzvipira Kwako Ngakurumbidze Jehovha Mwari! | Yokudzidza
“Rumbidzai Jehovha . . . nokuda kwokuzvipira kwevanhu.”​—VAT. 5:2.
NZIYO: 84, 75
NEI UINE CHOKWADI CHEKUTI . . .
Jehovha haafariri munhu anoregeredza basa rake?
Jehovha anokoshesa uye anokomborera basa rinoitwa nevanhu vakatendeka?
Jehovha anokoshesa kuzvipira kwako?
1, 2. (a) Erifazi naBhiridhadhi vakati Mwari anoona sei kumushumira kwatinoita? (b) Jehovha akaratidza sei maonero ake?
“MURUME akagwinya angabatsira Mwari here, uye ani naani ane njere angamubatsira here? Wemasimbaose anofara nokuti iwe wakarurama here, kana kuti ane chaanowana here nokuti iwe unoita kuti nzira yako isava nechainopomerwa?” (Job. 22:1-3) Wakambofunga nezvemhinduro dzemibvunzo yakaita seiyi here? Erifazi muTemani paakatanga kubvunza Jobho mibvunzo iyi, aifunga kuti mhinduro yacho ndeyekuti kwete. Shamwari yake, Bhiridhadhi muShuhi, akatotaura kuti hazviiti kuti vanhu vave vakarurama pamberi paMwari.​—Verenga Jobho 25:4.
2 Vanyaradzi venhema ava vakapa pfungwa yekuti zvatinoita pakushumira Jehovha takatendeka hazvina zvazvinomubatsira uye kuti kuna Mwari takangoita sechitemamachira kana honye. (Job. 4:19; 25:6) Pakutanga, tinogona kufunga kuti Erifazi naBhiridhadhi vairatidza kuzvininipisa. (Job. 22:29) Tinogona kufunga kudaro nekuti kana uchitarisa zvinenge zvichiitwa nevanhu uri pamusoro pegomo rakareba kana kuti uri mundege, zvinoita sekuti hapana zvavari kuita. Zvisinei, ndiwo here maonero anoita Jehovha ari kudenga paanotarisa zvatinoita pakutsigira basa reUmambo? Jehovha akaratidza maonero ake paakatsiura Erifazi, Bhiridhadhi naZofari nemhaka yekutaura nhema asi akaratidza kuti aifarira Jobho achimuti “mushumiri wangu.” (Job. 42:7, 8) Saka hachisi chokwadi kuti munhu haabatsiri kuna Mwari.
3. Erihu akatii nezvezvatinoita pakushumira Jehovha, uye airevei?
3 Erihu haana kururamiswa naJehovha paakabvunza kuti: “Kana chokwadi wakarurama, unomupei [Mwari], kana kuti chii chaanogamuchira chinobva paruoko rwako?” (Job. 35:7) Erihu aireva here kuti zvatinoita pakushumira Mwari hazvina zvazvinobatsira? Aiwa. Aireva kuti Jehovha haana chaanobva kana tikasamunamata. Zvaari zvakakwana. Hatikwanisi kumupfumisa kana kumupa simba. Asi zvese zvatiinazvo zvakadai seunhu hwakanaka, zvipo kana kuti simba zvinobva kuna Mwari uye anotarisa kuti tiri kuzvishandisa sei.
4. Jehovha anofananidza mabasa emutsa atinoitira vamwe nechii?
4 Jehovha anoona rudo rwakavimbika runoratidzwa vashumiri vake sekuti ruri kuratidzwa iye. Zvirevo 19:17 inoti: “Munhu anonzwira nyasha munhu akaderera, anokweretesa Jehovha, uye Iye achamuripa zvaanoita.” Rugwaro urwu runoreva here kuti Jehovha anoona mabasa ese emutsa anoitirwa vakaderera? Tingati Musiki wezvinhu zvese anoona here mabasa emutsa anoitwa nevanhu sezvikwereti zvaanobhadhara kuburikidza nekuvapa makomborero? Hongu. Izvi zvakatsigirwa neMwanakomana wake pachake.​—Verenga Ruka 14:13, 14.
5. Mibvunzo ipi yatichakurukura?
5 Jehovha akatuma muprofita Isaya kuti ataure achimumiririra, zvichiratidza kuti anofarira kuti vanhu vakatendeka vavewo nezvavanoita pakuzadzisa chinangwa chake. (Isa. 6:8-10) Isaya akabvuma kutumwa. Mazuva ano vanhu vakawanda vari kutiwo kuna Jehovha, “Ndiri pano! Nditumei,” pavanobvuma kuita mabasa akaoma pakumushumira. Asi mumwe angati: ‘Ndinoonga mukana wekuzvipira kuita basa raJehovha, asi zvine basa here kuti ini pachangu ndaitei pakumushumira? Jehovha angatadza here kufambisa basa rake pasinei nekuti ndaitawo basa racho here kana kuti handina?’ Wakambofungawo saizvozvo here? Ona kuti zvakaitika mumazuva aDhibhora naBheraki zvinopindura sei mibvunzo iyoyo.
VAKAPEDZWA SIMBA NEKUTYA, VAKAZOSIMBISWA NAMWARI
6. Musiyano upi waiva pakati pevaIsraeri neuto raJabhini?
6 VaIsraeri vakanga vava nemakore 20 ‘vachidzvinyirirwa zveutsinye’ naJabhini, mambo weKenani. VaIsraeri vaigara kumaruwa vaitotya kuonekwa paruzhinji. Kana totaura nezvehondo, vaIsraeri vakanga vasina zvombo zvekurwisa kana zvekuzvidzivirira nazvo, asi vavengi vavo vaiva nengoro dzehondo 900 dzaiva nemajeko esimbi.​—Vat. 4:1-3, 13; 5:6-8. *
7, 8. (a) Jehovha akatanga kurayira Bheraki kuti aite sei? (b) VaIsraeri vakakunda sei uto raJabhini? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)
7 Kunyange zvakadaro, Jehovha akapa Bheraki murayiro wakajeka achishandisa muprofitakadzi Dhibhora wekuti: “Enda, mupararire paGomo reTabhori, uende nevarume zviuru gumi vevanakomana vaNaftari nevevanakomana vaZebhuruni. Ndichakwevera Sisera mukuru weuto raJabhini nengoro dzake dzehondo neboka rake revanhu kwauri kumupata une rukova weKishoni, uye ndichamuisa muruoko rwako.”​—Vat. 4:4-7.
8 Shoko rakapararira. Vanhu vakanga vazvipira vakaungana paGomo reTabhori. Bheraki haana kumbotambisa nguva pakuita zvaakanga arayirwa naJehovha. (Verenga Vatongi 4:14-16.) Pavairwa hondo muTaanaki, mvura yakatsvotsvoma zvekuti nzvimbo yacho yakanga yangova matope ega ega. Bheraki akadzingirira uto raSisera kwemakiromita 24 kusvika kuHarosheti. Sisera paaidzingirirwa, ngoro yake yakanyura mumatope achibva aisiya ndokutizira muZaananimu. Akapotera mutende raJaeri, mudzimai waHebheri, muKeni, uye akagamuchirwa zvakanaka naJaeri. Sezvo akanga aneta, akabva abatwa nehope. Zvakanga zvava nyore kuti Sisera aurayiwe naJaeri. (Vat. 4:17-21) Vavengi vevaIsraeri vakakundwa! *
MAONERO AKASIYANA PANYAYA YEKUZVIPIRA
9. Vatongi 5:20, 21 inotii nezvehondo yekurwisa Sisera?
9 Zvitsauko 4 ne5 zvaVatongi zvinofanira kudzidzwa pamwe chete nekuti chitsauko chimwe nechimwe chinobudisa mashoko asingawaniki mune chimwe. Semuenzaniso, Vatongi 5:20, 21 inoti: “Nyeredzi dzakarwa dziri kudenga, dzakarwa naSisera dziri mumakwara adzinotenderera dziri. Rukova rwaKishoni rwakavakukura.” Mashoko aya anoreva here kuti vakabatsirwa nengirozi kana kuti paiva nezvinhu zvakaita sematombo zvakadonha zvichibva kudenga? Nyaya yacho hainyatsotsananguri zvakaitika. Asi ndiani kunze kwaMwari aizonayisa mvura yakawanda kudaro panzvimbo uye panguva iyoyo zvekuti yakanyudza ngoro dzehondo 900? Vatongi 4:14, 15 inoratidza katatu kuti Jehovha ndiye akaita kuti vakunde. Hapana kana mumwe wemasoja 10 000 evaIsraeri aigona kuzvirova dundundu nekukunda kwavakaita.
10, 11. “Merozi” yaiva chii uye yakatukirwei?
10 Asi nechepakati perwiyo rwaDhibhora naBheraki rwekurumbidza Jehovha nemhaka yekukunda kwavakaita, vakaimba vachiti: “‘Tukai Merozi,’ yakadaro ngirozi yaJehovha, ‘rambai muchituka vagari vayo, nokuti havana kuuya kuzobatsira Jehovha, kuzobatsira Jehovha nevane simba.’”​—Vat. 5:23.
11 Zviri pachena kuti Merozi yakatukwa chaizvo zvekuti zvakaoma kutaura kuti yaimbonyatsova chii. Yaiva guta revanhu vasina kuzvipira kunobatsira Bheraki muhondo here? Kana kuri kuti Sisera akapfuura nemuguta racho paaitiza, vagari vemo vakawana mukana wekumubata here asi ndokurega kuushandisa? Vaigotadza sei kunzwa kuti Jehovha aitsvaga vanhu vanozvipira, ipo paiva nevanhu 10 000 vakabva munzvimbo dzakavapoteredza vakanga vaungana kuti varwe hondo iyi? Fungidzira vanhu vemuMerozi vachiona Sisera achimhanya nemumigwagwa yavo ari ega achishaya kuti oita sei. Uyu waigona kuva mukana wakazonaka wekuti vatsigire chinangwa chaJehovha vokomborerwa naye. Asi panguva iyi inokosha, pavakawana mukana wekuitira Jehovha chimwe chinhu, hapana chavakaita. Izvi zvakasiyana chaizvo neushingi hwakaratidzwa naJaeri sezvinorondedzerwa mumavhesi anozotevera.​—Vat. 5:24-27.
12. Musiyano upi wemafungiro evanhu unoratidzwa pana Vatongi 5:9, 10, uye musiyano wacho unofanira kuita kuti tiite sei mazuva ano?
12 Pana Vatongi 5:9, 10, tinoona mumwe musiyano uri pakati pemafungiro evaya vakaenda naBheraki neevaya vasina kuenda naye. Dhibhora naBheraki vakarumbidza “vatungamiriri vaIsraeri, vaiva vazvipiri pakati pevanhu.” Vakanga vakasiyana chaizvo ‘nevatasvi vembongoro hadzi’ vaizvikudza vakaramba kuenda, uye nevaya ‘vaigara pamakapeti anokosha,’ vachinakidzwa neupenyu hweumbozha. Kusiyana nevaya ‘vakafamba mumugwagwa,’ vachida zvinhu zviri nyore vaya vakaenda naBheraki vakanga vakazvipira kunorwa mugomo reTabhori rainge rizere matombo uye mubani reKishoni maiva nemachakwi. Vese vaida mafaro vakakurudzirwa kuti ‘vayeuke’ kana kuti vafungisise nezvemukana wavakarasikirwa nawo wekuzvipira kuita basa raJehovha. Ndizvo zvinofanira kuitwawo nevese vari kurega kushumira Mwari zvizere mazuva ano.
13. Mafungiro emarudzi aRubheni, Dhani naAsha ainge akasiyana papi neemarudzi aZebhuruni naNaftari?
13 Vaya vakazvipira vakazvionera vega kuti Jehovha anoratidza sei uchangamire hwake. Vakava nechimwe chinhu chine musoro chekutaura nezvacho ‘pavaizorondedzera mabasa akarurama aJehovha.’ (Vat. 5:11) Asi pana Vatongi 5:15-17 panoratidza kuti marudzi aRubheni, Dhani naAsha ainyanya kufunga nezvepfuma yawo yakadai sezvipfuwo, ngarava uye zviteshi zvengarava pane kufunga nezvebasa raJehovha. Kusiyana nevanhu ivava, vaZebhuruni nevaNaftari ‘vakaisa upenyu hwavo pangozi’ kuti vatsigire Dhibhora naBheraki. (Vat. 5:18) Tinowana chidzidzo chinokosha pakusiyana kwemafungiro evanhu panyaya yekuita basa rekuzvipira.
14. Tinoratidza sei kuti tinotsigira uchangamire hwaJehovha mazuva ano?
14 Mazuva ano hatishevedzwi kuti tiende kuhondo chaiyo, asi tine ropafadzo yekuratidza ushingi kuburikidza nekushingaira pakuparidza. Iye zvino musangano raJehovha mava kunyanya kudiwa vanhu vakawanda vanozvipira. Mamiriyoni ehama nehanzvadzi ari kuzvipira kuita mabasa akasiyana-siyana enguva yakazara akadai sekupayona, kushanda paBheteri uye kuvaka Dzimba dzeUmambo. Vakuru nevadiki vakawanda vanoita mabasa ekuzvipira pamagungano. Fungawo nezvevakuru vane basa rakaoma rekushanda muMakomiti Anokurukura Nezvipatara uye rekuronga magungano. Iva nechivimbo chekuti Jehovha anokoshesa uye haazombokanganwi kuzvipira kwako.​—VaH. 6:10.
Usati waita chisarudzo, funga kuti chinogona kubatsira kana kukanganisa sei mhuri yako uye ungano (Ona ndima 15)
15. Tingaita sei kuti chido chedu chekuita basa raJehovha chirege kupera?
15 Tinoda kuongorora mafungiro edu panyaya yekuita basa rekuzvipira. Mumwe nemumwe wedu angazvibvunza kuti: ‘Ndiri kurega vamwe vachiita zvakawanda pabasa racho here? Ndiri kurega kuda pfuma kuchinditadzisa kuzvipira here? Ndiri kutevedzera here kutenda neushingi zvaiva naBheraki, Dhibhora, Jaeri nevanhu 10 000 vakazvipira, kuburikidza nekushandisa chero zvandiinazvo pakushumira Jehovha? Kana ndiri kufunga kutamira kune rimwe guta kana nyika kuti ndive neupenyu huri nani, ndiri kunyengetera here kuna Jehovha ndichimuudza kuti izvi zvinogona kubatsira kana kukanganisa sei mhuri yangu uye ungano?’ *
16. Kunyange zvazvo Jehovha asina chaanoshaya, chii chatingamupa?
16 Jehovha anotikudza kuburikidza nekutibvumira kuti titsigire uchangamire hwake. Sezvo Dhiyabhorosi akatanga kunyengera vanhu kuti vatsigire divi rake, kutsigira kwaunoita uchangamire hwaJehovha kunonyatsoratidza kuti uri kudivi ripi. Kutenda uye kuvimbika kwedu kunoita kuti tizvipire kuita basa raJehovha, uye kunoita kuti afare. (Zvir. 23:15, 16) Kumutsigira kwaunoita kunomubatsira kuti apindure kushorwa kwaanoitwa naSatani. (Zvir. 27:11) Saka ukaramba uchitsigira Jehovha uye uchimuteerera, unenge uchitomupa chimwe chinhu chaanokoshesa uye chinoita kuti afare zvikuru.
17. Vatongi 5:31 inotidzidzisei pamusoro pezvichaitika mune ramangwana?
17 Pasina nguva, panyika pachange pazara nevanhu vanotsigira uchangamire hwaJehovha chete. Tinotarisira chaizvo kusvika kwenguva iyoyo. Tinonzwa sezvakaita Dhibhora naBheraki avo vakaimba kuti: “Vavengi venyu vose ngavaparare, haiwa Jehovha, vanokudai ngavave sezvinoitika panobuda zuva rine simba.” (Vat. 5:31) Chikumbiro ichi chichapindurwa Jehovha paachaparadza nyika yakaipa yaSatani. Pachatanga hondo yeAmagedhoni, pachange pasingadiwi hapo vanhu vanozvipira kuti vakunde muvengi. Ichange yava nguva yekuti ‘timire munzvimbo dzedu, toona kuponeswa kwatichaitwa naJehovha.’ (2 Mak. 20:17) Asi parizvino tine mikana yakawanda yekutsigira uchangamire hwaJehovha nechido uye neushingi.
18. Kuzvipira kwako kunoita kuti vaya vanobatsirwa nakwo vaite sei?
18 “Rumbidzai Jehovha . . . nokuda kwokuzvipira kwevanhu.” Dhibhora naBheraki vakatanga kuimba rwiyo rwavo rwekukunda, vachirumbidza Mwari Wokumusorosoro, kwete vanhu. (Vat. 5:1, 2) Saizvozvowo, kuzvipira kwedu mazuva ano ngakuite kuti vese vanobatsirwa nakwo ‘varumbidze Jehovha!’
^ ndima 6 Majeko aiva pangoro idzi aiva mapanga marefu, akapinza uye dzimwe nguva ainge akakombamiswa. Majeko acho aigona kunge aibuda nechepakati pemavhiri engoro. Ndiani aizoita chivindi chekusvika pedyo nengoro dzehondo dzaityisa kudaro?
^ ndima 8 Unogona kuwana mamwe mashoko munyaya inoti “‘Ndakasimuka Saamai Pakati paIsraeri’” muNharireyomurindi yaAugust 1, 2015.
^ ndima 15 Ona nyaya inoti, “Kuzvidya Mwoyo Nenyaya Dzemari” iri muNharireyomurindi yaJuly 1, 2015.